Afrika Mainty · Desambra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Desambra, 2009
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Desambra, 2009
Rwanda: Video-an'ireo mpirotsaka an-tsitrapo
Rwanda 31 Desambra 2009
Misy video mitohitohy napetrak'i kdarpa ao amin'ny YouTube, izay manasongadina ireo mpirotsaka an-tsitrapo sy ireo olona nihaona tamin'izy ireo nandritra ny fandalovan'izy ireo tany Rwanda sy niarahan'izy ireo niasa tamin'ny mponina tao an-toerana.
Madagasikara tamberina 2009 – fizarana voalohany -
Madagasikara 31 Desambra 2009
Mby amin'ny fahataperany ity ny taona 2009. Taona nanjakana ary mbola anjakan'ny hotakotaka ho an'i Madagasikara. Ity lahatsoratra manaraka ity ny tapany voalohany (mitantara ny volana Janoary ka hatramin'ny Aprily) amin'ny fizarana roa manamarika ny taona 2009, raha tarafina avy amin'ireo olom-pirenena niaina tao anatin'ity savorovoro ity. Janoary: Raha nanomboka...
Ginea 14 Desambra 2009
Ala mitentina $460 000 isan'andro no potika eto Madagasikara
Amerika Avaratra 11 Desambra 2009
Raha manatrika vovonana iraisam-pirenena karakarain'ny Firenena Mikambana momba ny toetr'andro any Copenhagen ny firenen-drehetra dia Madagascar, nahapotika sahady ny 90%n'ny ala voajanahariny i Madagasikara, ary mbola iharan'ny fanondranana hazoala an-tsokosoko hatrany. Vitana ekipa miafina mpanao famotorana iray manko ankehitriny ny dosie iray manontolo momba ny fitrandrahana bolabola (bois de rose)...
Amerika Latina 01 Desambra 2009
Anio, faha-25 Novambra no andro iraisam-pirenena Iadiana amin'ny Herisetra Atao amin'ny Vehivavy, ary amin'ny alalan'ny horonantsary no anehoan'ny olona maro sy fikambanana maneran-tany ny fanirian'izy ireo hampiato ny herisetra ary koa ny ezaka entin'izy ireo hanamafisana fa manana tontolo afaka iainana am-piadanana ny vehivavy.